Maitiro ekubhadhara pazviteshi zvegesi ne iPhone yako | IPhone nhau
Apple Pay yakasvika mavhiki mashoma apfuura kuti iite nyore kubhadharwa nhare Asi haisi iyo chete yekubhadhara system inogona kushandiswa neiyo iPhone, uye makambani mazhinji uye akawanda arikushandisa dzimwe nzira dzekubhadhara zvigadzirwa zvavo kubva ku iPhone yedu, pasina kutakura makadhi kana kutsungirira mitsara pakaunda yakamirira yavanobhadharisa. isu. Zviteshi zvegasi ndedzimwe nzvimbo uko nzira yekubhadhara iyi iri kuwanda, uye kwatove nemakambani akati wandei ane yavo yega app yekubhadhara kubva kune iyo iPhone..
1 Inonyaradza uye yakapusa
2 Repsol, Cepsa uye Carrefour, asi zvimwe zvinosvika
Inonyaradza uye yakapusa
Ndezvipi zvakanakira ino yekubhadhara system? Kana tikatarisa tsika yechinyakare yekubhadhara, tinozviponesa isu pachedu nekutakura mari nesu, kana kuzadza portfolio yedu nemakadhi echikwereti akasiyana, makadhi ekuvimbika nezvimwe zvakadaro. Asi kunyangwe iwe ukatarisa kuApple Pay, iyi nzira yekubhadhara iri nyore zvakanyanya, nekuti hatitombofaniri kubuda mumotokari kubhadhara (tsime, kuisa peturu hongu).
Iko kuvhiya kuri nyore kwazvo, iwe unongofanirwa kunyoresa kuitira kwavo sevhisi neyakajairwa data reemail uye zvimwe zvishoma. Kamwe yakanyoreswa Tinofanira kuwedzera nzira yekubhadhara inoshanda, uye tichava nechishandiso chakagadzirirwa kushandiswa pese patinochida.
Zvese zvinoshandiswa zvinoshanda nenzira yakafanana neiyo inoratidzwa muvhidhiyo: tinosvika panzvimbo yegasi, sarudza pombi, ratidza huwandu uye ubhadhare. Iye zvino isu tinongoda kuzadza dhipoziti nemari yatakaratidza uye tinogona kubva tisina kuenda ku Checkout, nekuti mubhadharo unoitwa uchishandisa kadhi iro ratinoisa mukushandisa.
Repsol, Cepsa uye Carrefour, asi zvimwe zvinosvika
Parizvino mafomu atakawana anotibvumidza kuti tiite muripo uyu kubva nharembozha matatu: KubhadharaDzvanya Repsol, Cepsa Pay uye Mi Carrefour. Asi isu hatina mubvunzo kuti mafomu matsva achawedzerwa munguva pfupi izvo zvichabvumidza idzi kubhadhara kubva kunhare. Heano ekurodha pasi ekushandisa ekushandisa iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekubhadhara pazviteshi zvegesi ne iPhone yako
Photicon inotsiva iyo Icon yeapp mifananidzo neyekupedzisira kutora yatakatora (tweak)